Nofeembar | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Nofeembar, 2010
War Deg Deg ah: Qasaaraha dagaalo iyo duqeymo maanta ka dhacay Muqdisho oo sii kordhay
Nofeembar 30, 2010
Waxaa sii kordhaya qaasaraha dagaaladii iyo duqeymihii xalay ilaam maanta ka dhacay qeybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda KMG Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM iyo Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab.
Kadib markii xalay ilaa iyo maanta dagaalo iyo duqeymo xoogan oo u dhaxeeya dhinacyada isaga soo horjeeda ay ka dhaceen degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxaa soo baxaya faah faahin dheeraad ah oo ku aadan qasaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalada iyo duqeymahaasi.
Inta la’ogayahay 8-ruux ayaa ku geeriyootay 27-kalana waa ay ku dhaawacmeen dagaalada iyo duqeymihii xalay ka dhacay degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Boondheere, C/casiis iyo Shibis goobahaasi oo ah meelo ay isku horfadhiyaan ciidamo ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya oo kaa shaanaya kuwa AMISOM iyo Xarakada Mujaahidiinata AL Shabaab iyo Xisbul Islaam oo iyana isku dhinac ah.
Dhamaan dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaaladii iyo duqeymihii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxaa ay yihiin dad rayid ah oo rasaasta ugu tagtay xaafadahooda.
Cali Muuse Sheekh oo ah Madaxa gaadiidka gurmedka deg dega ee AMBALASTA oo ay Idaacaddaha Shabeelle & Waajid la xiriirtay ayaa waxaa uu sheegay qasaaraha ugu badan in ay ka soo qaadeen xaafadaha Sanca, Suuq bacaad iyo agagaarka Carwo Liimo oo ka kala tirsan degmooyinka Howlwadaag iyo Yaaqshid ee gobolka Baanadir.
Dhaawacyada dadkii wax ku noqday dagaaladii xalay ilaa maanta ka dhacayay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagaarsiiyay Isbitaalada magaalada Muqdisho, kuwaasi oo xaaladooda caafimaad iminka lagula tacaalayo xarumaha caafimaad ee lagaarsiiyay.
Warar kale: Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo), ayaa beesha caalamka ka codsday inay gacan ka siiyaan xukuumaddiisa dagaal ay la galayso kooxaha Islaamiyiinta ah ee kasoo horjeeda, gaar ahaan Xarrakatul Shabaab.
“Taageero aan caalamka ka helno, waxay qayb ka qaadan kartaa xal u helidda colaadaha Soomaaliya ka taagnaa muddada 20-ka sano ku dhow,” ayuu ra’iisul wasaare Farmaajo u sheegay wariyaha BBC-da Andrew Harding oo Muqdisho booqday.
Mr. Farmaajo oo 48-jir ah, muddo dheerna ku noolaa dalka Mareykanka, ayaa bishii hore loo magacaabay ra’iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo ay hareeyeen dagaallo, burcadbadeednimo iyo afduubyo.
“Xukuumadda aan soo magacaabay, waxay wax ka badali doontaa xaaladda dalka uu ku sugan yahay, waana ku kalsoonnahay xubnaha aan wasiirrada ka dhigay inay yihiin kuwo aqoon iyo karti u leh xalisinta Soomaaliya,” ayuu Farmaajo ku sheegay hadal uu jeediyay markii la ansixiyay xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi, ayaa horay u sheegay inuusan wax wadahadal ah la galayn kooxaha ka dagaalama Soomaaliya, gaar ahaan Al-Shabaab oo uu ku eedeeyay inay xiriir la leedahay Al-Qaacida ayna dagaalyahanno shisheeye ah ka barbar dagaalamaan.
Xarrakatul Shabaab iyo Xisbul Islaam, ayaa iyaguna dhankooda horay u sheegay inaysan wadahadal la galayn xukuumadda cusub, balse ay dagaal kala hortagayaan, iyagoo sheegay inay ka itaal daran tahay xukuumaddii ka horreysay.
Hadalka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa imaanaya iyadoo Madaxweyaha Uganda oo toddobaadkan booqday Muqdisho, uu sheegay in beesha calaamka ay dayacday xal u helidda arrimaha dalka Soomaaliya, sidoo kalena aysan u arag xasaradaha Soomaaliya ka taagan kuwo khatar ah.
Nofeembar 29, 2010
Mudanayaal ka tirsan barlamanka KMG Soomaaliya ayaa sheegay in gudoomiyaha barlamanka uu xilkiisa ku waayay Takri fal ay sheegeen in uu ku sameeyay barlamanka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah mudnayaasha barlamanka KMG Soomaaliya gaar ahaan 92-dii Xildhibaan ee ka soo horjeestay ansixinta Xukuumadda cusub oo maanta warsaxaafadeeda ka soo saaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gudoomiyaha barlamanka uu jabiiyay axdiga iyo xeer hoosaadka barlamanka islamarkaana sida ay sheegeen uu awood u adeegsaday Xuquuqda barlamanka sidaasi daraadeed, waxaa ay tibaaxeen in gudoomiyaha baralamanka xilikii ay ka qaadeen, iyagoo daliishanaya qodobo ka mid ah xeer hoosaadka barlamanka.
Waxaana ay ugu baaqeen Mudanayaasha barlamanka in ay kulan dag dag ah ay isugu yimaadaan islamarkaana ay doortaan gudoomiye barlaman Cusub sida warsaxaafadeedkaasi uu u aqriyay warfidiyeenada Xildhibaan Max’ed Muxudiin Muqtaar.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa waxaa ay sheegeen in habkii loo ansixiyay Xukuumadda Ra’iisul wasaare Max’ed C/laahi Max’ed Farmaajo inay qilaafsantahay xeer hoosaadka barlamanka, iyagoo tilmaamay in Xukuumaddaasi ay waysay codka kalsoonida sidaasina aysan ku ahayn mid ansax ah, sida mar kale uu tilmaamay Xildhibaan Max’ed Muxudiin Muqtaar.
War Deg Deg ah: Xer ilaaliyihii Maxkamadda ee gobolka Bari oo lagu dilay Boosaaso
Waxaa maanta galinkii dame kooxo hubaysan Magaalada Boosaaso ay ku dileen Xer ilaaliyihii Maxkamadda sare ee gobolka Bari, iyadoo caawa magaaladaasi ay howlgalo ka wadaan ciidamada amaanka ee Maamulka Puntland.
Kooxo ku hubaysan Bastoolado ayaa salaadii maqrib kadib waxaa ay gudaha magaalada Boosaaso ee Xarunta gobolka Bari ku toogteen Xer Ilaaliyihii Maxkamada Darajada 1-waad ee Gobolka Bari Gaashanle dhexe Cabdullaahi Saalax Shirwac ahaana Taliye ku xigeenkii Kulyadda tababarka ciidamada ee Carmo.
Kooxahaasi hubaysan ayaa dhowr xabadood waxaa ay la dhaceen Mas’uulkaasi waxaana daqiiqado kadib uu ugu geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray rasaastee ay la beegsadeen.
Dilkaasi kadib ayaa waxaa goobta yimid ciidamo ka tirsan kuwa booliska Maamulka gobolkeed Puntland ee magaalada Boosaaso, iyagoo halkaasi ka wada howlgalo ay ku baadi goobayaan ragii ka dambeeyay dilkaasi kuwaasi oo markiiba goobta isaga baxsaday.
Gaashanle dhexe Cabdullaahi Saalax Shirwac, ayaa dhawaan waxaa loo magacaabay xilkaasi, iyadoo magaalada Boosaaso ee Xarunta gobolka Bari ay horey ugu dhaceen falalka nuucaani oo kale ah oo lagu bartilmaameedsaday Mas’uuliyiinta Maamuka Puntland ee gobolka Bari.
A- Ismaciil Cumar Geele la siiyo dhul beereed aad u wayn oo ka haqab tiro lacagtan faraha badan ee qalaad ee gaaraysa Laba milyan $ 2,000.000 oo doolar sanad kasta oo ooga baxda keliya khudrad, waxaana la ogsoon yahay oo hubaal ah in dhul baaxad wayn looga baneeyey Shabeelada Hoose, waxaana hakad geliyey kacdoon ay sameeyeen dadkii dhulka lahaa oo ka soo hor-jeestay arintaas. In badan Soomaalida waxay aaminsan yihiin In Geele daacad ay ka tahay in Soomaaliya heshiiso laakiin arinka sidaa aad ayuu uga fog yahay, DigilMirifle waxay ku maahmaahdaan “Laf Eey Ku Noogi Waraabi Ing Usubti” ama fasirka afka maxaatiriga lagu yiraah ” Laf Eey ka noogey dhuuqideeda, Waraabe wey u cusub tahay markuu arko” taas oon ula jeedo Talyanigii iyo la-jirkiisiiba meel ay ka quusteen ayaa waxay u cusub tahay Geele iyo ina Salaad Booy.
B- Kan loo saxiixay Cabdiqaasim waa in uu qabiilkiisa degaan uu u helaa, meeshuu geeyana aan lagala hadlin oo aan la oran ka soo saar qoladaada, uuna dejinaayo qabiilkiisa Ceyr inta u dhexeysa Shabeelada hoose iyo Jubada hoose.
Soo saarid iska daaye wuuba kordhiyey, markaa kii lahaa dawlad baa ii dhalatay, kuuma dhalan ee waxaa kuu yimid mid soo maryo dhigtay oo doonayaan ayagoo huwan qaran in qabiil kugu gumaadaan, waxaa kaloo la isku af gartay in dawlada loo qaybsado sinaan oo macnaheeda yahay Shantii qaybood ee Somalida loo qeybiyey, qeybtiina Shan waziir qaadato waxaana dowlada ka koobnayd 25 waziir.
Waxaanu aragnay in dadka lagu magacaabay “Others” qaybtoodii shanta aheyd laga siiyey hal waziir, xagee baa afartii kale la geeyey hadey sinaan jirto.
Wasiirka Dastuurka oo xilkiisa la wareegay.SAWIRRO
Dr. Madoobe Nuunow Maxamed oo ah wasiirkii hore ee wasaarada Dastuurka iyo Federaalka ayaa maanta xaflad uu ku qabtay xafiiska Muqdisho ee wasaarada Dastuurka waxa uu xilka wasaarada ku wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda Dastuurka, federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Eng. Maxamuud Maxmed Boonow – oo labaduba ka soo jeeda Digil & Mirifle.
Madoobe Nuunow ayaa munaasabadda ka sheegay waxyaabaha u soo qabsoomay wasaradda iyo halka uu marayo qabyo qoraalka dastuurka ee la doonayo in umadda Somaliyeed uu u noqdo Dastuur.
Waxa uu intaa ku daray in uu la shaqeynayo wasiirka cusub ee wasaaradda dastuurka, federaalka iyo dib u heshiisiinta isagoo warbixin ka siiyay halka ay marayaan howlaha wasaaradda iyo waxyaabaha u qabsoomay intii uu hayay talada wasaaradaasi.
Eng Maxamuud Maxamed Boonow oo maanta lagu wareejiyay xilka wasaaraddaasi ayaa uga mahad celiyay Madoobe Nuunow sida wanaagsan ee uu ugu wareejiyay xilka wasaaradaasi iyo balanqaadka uu u sameeyay ee ku aaddan in uu la shaqeynayo wasaaradda.
Wasiiradii kale ee maanta ka qeyb galay munaasabadda xil wareejinta wasaarada dastuurka iyo arimaha federaalka oo ay ka mid ahaa wasiirkii hore ee arrimaha bulshada iyo dhaqan celinta Prof. Dalxa ayaa ugu hambalyeeyay wasiirka cusub xilka culus ee uu maanta la wareegay iyagoo Alla ugu baryay in uu la garab galo xilkaasi uu u qaaday shacabka somaliyeed.
Wasiirkaan ayaa ah kii ugu horreeyay ee la wareega xilkiisa golaha wasiirada cusub ee dhawaan la dhaariyay.
Wasiirka Gaashaandhigga iyo wafdi uu hoggaaminayo oo Burundi u safray
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ahna R/wasaare ku xigeen Dr. C/xakkin Faqiiyo wafdi balaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta u ambabaxay Magaalda Bujunbuura ee dalka Burundi oo uu ka dhacayo shir ay leeyihiin dalalka Bariga Afrika.
Wafdiga wasiirka waxaa ka mid ah Taliyaha Ciidanka XDS Generaal Axmed Geeddi Jimcaale iyo saraakiil kale, waxayna ka qeyb galayaan shir ay isugu imaanayaan wasiirada gaashaan dhigga ee dalalka Bariga Afrika.
C/Xakiin Maxmuud Xaaji Fiqi ayaa inta uusan dalka ka ambabixin xilka kala wareegay wasiirkii hose ee gashaandhigga Abuukar Cismaan Mardaadi xaflad lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
FAAHFAAHIN KA HADLEYSA DALKA
Ciidamada Shisheeyaha oo Madaafiic ku garaacay qeybo ka tirsan degmooyinka Waqooyi ee magaalada Muqdisho.
Nofeembar 28, 2010
Dad rayid ah ayaa ku geeriyooday,kuwo kalena waxaa kasoo gaaray dhaawacyo kadib markii Ciidamada Shisheeyaha barqanimadii maanta ay Madaafiic ku garaaceen qaar ka tirsan degmooyinka ku yaala waqooyiga magaalada Muqdisho.
Dagaalo iyo Duqeeymo goos goos ah oo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa Amisom oo dhinac ah iyo Xarakada Al Shabaab ayaa xalay ilaa saaka waxa ay ka dhacayaan qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Dagaaldaan iyo Duqeeymahan oo ah kuwa sameeyn ku yeeshay magalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dhacayaan xaafado ka mid ah degmooyinka Howl-Wadaag, Hodan, iyo Degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada Amiosm ayaa madaafiicda ridad dheer waxa ay la dhacayaan xaafad ka mid ah magaalada Muqdiso hayeeshee dagaalada fool ka foolka ayaa ah kuwa goos goos ah.
Saraakiisha Gawaarida qaada dhaawacyada ayaa xaqiijiyey in dad dhaawac ah geeyeen isbitaalada magaalada Muqdisho hasa ahaatee lama oga qasaaraha dhabta ah ee dagaalada magaalada Muqdisho.
Dagaaladaan ayaa ka dambeeyey ka dib markii xoogaga Al Shabaab weerar ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada Dowladda iyo Amisom ay ku lee yihiin jiida dagaalka, waxa sarakiil u hadshay Shabaabka ay shegeen in dagaalada ay qasaaro ku gaarsiiyeen ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa Amisom islamarkaana dagaalada ay sii wadi doonaan.
Dagaalkan ayaa ku soo beegmay maalin kadib marki baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey xukuumada cusub oo iyadu horay u sheegtay in ay la dagaalami doonto kooxaha mucaaradka.
War Deg Deg ah: Madaxweynaha Uganda oo Muqdisho tegay, dibna uga laabtay
Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri ayaa si qarsoodi ah ku yimid manata magaalada Muqdisho xili dagaalo culus ka jireen iyadoona uuna soo daafin hoolka eraboorka halkaana waxuu kula kulmay madaxweynaha dowlada Sheikk Shariif iyo Wasiirkiisa koowaad ee Farmaajo iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheikh Aadan.
Kulanka labada madaxweyne iyo Gudoomiye Shariif Xasan ay ku yeesheen eraboorka Muqdisho ayaan la ogeen waxa ay ka wada hadleen waloow hadalkoodu uu yahay siday ula dagaali lahayeen xoogaga sida weyn uga soo horjeeda ee Alshabaab.
Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri oo intoow joogay Muqdisho rasaas lagu harqinaayey goobaha shirka uu ka socday waloow la ogeen in cid wax ku noqtay.
Magaalada Muqdisho oo xiligaan goobta ugu cabsida badan aduunka ayaa la dhi karaa waa meel leysku baroobeeyo awooda in kastoo xiligaan kooxa ugu awooda badan ay tahay Alshabaab.
Madaxweyne Museveni ayay tahay markii ugu horreysay oo uu Muqdisho tago tan iyo horraantii sanadkii 2007, xiligaas oo ay ciidamo ka socda dalkiisa tageen Muqdisho, inkastoo uu Museveni mar Muqdisho tegay sanadkii 1992-kii, markaas oo uu soo booqday Jen. Maxamed Faarax Caydiid oo ay saaxibo isu dhow ahaayeen.
A- Ismaciil Cumar Geele la siiyo dhul beereed aad u wayn oo ka haqab tiro lacagtan faraha badan ee qalaad ee gaaraysa Laba milyan $ 2,000.000 oo doolar sanad kasta oo ooga baxda keliya khudrad, waxaana la ogsoon yahay oo hubaal ah in dhul baaxad wayn looga baneeyey Shabeelada Hoose, waxaana hakad geliyey kacdoon ay sameeyeen dadkii dhulka lahaa oo ka soo hor-jeestay arintaas. In badan Soomaalida waxay aaminsan yihiin In Geele daacad ay ka tahay in Soomaaliya heshiiso laakiin arinka sidaa aad ayuu uga fog yahay, DigilMirifle waxay ku maahmaahdaan “Laf Eey Ku Noogi Waraabi Ing Usubti” taas oon ula jeedo Talyanigii iyo la-jirkiisiiba meel ay ka quusteen ayaa waxay u cusub tahay Geele iyo ina Salaad Booy.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Nofeembar, 2010.